Isikhathi esimangalisayo - Unyaka Omusha. Ulinde kokubili izingane kanye nabantu abadala. Izakhamuzi eziningi zezwe lethu sezivele ziqala ukucabanga ngezipho kuphela, kodwa futhi nokuthi zizophi lapho zihamba khona eholidini ngamaholide omnyaka omusha nomndeni wazo. Ukuhamba kwamaholide omnyaka omusha, esikhathini sethu sivame ukujwayela njalo. Lokhu kwakungaphambili, kwakwanele ukuba siye emzaneni ukuvakashela ugogo, kodwa manje ngifuna okungaphezulu, vakashela amanye amadolobha, amanye amazwe.
Namuhla ungahamba noma yikuphi, kodwa kudingeka ube nezindlela zalokhu, ngakho-ke, ngaphambi kokuthi uhambe noma yikuphi, uhambo kufanele luhlelwe ngokushesha, futhi mhlawumbe izinyanga ezimbalwa ngaphambi kokuqaliswa kwalo.
Ukuhamba konyaka omusha cishe akufani nokuhamba okuvamile, ngakho-ke kudingeka uthathe nawe zonke izinto ezifanayo ozithatha nawe ekuhambeni okuvamile. Kodwa kufanele uhlale ukhumbule ukuthi konke kuhlukile kuNyaka Omusha, njengesikhathi esivamile. Ukuziphatha kwabantu ngamaholide omnyaka omusha kuhluke kakhulu kunokujwayelekile, abantu baziphathe ngendlela ehlukile.
Ukukhetha indawo yokuphumula.
Uma unquma ukuya kwelinye izwe, ikakhulukazi uma kuvame ukuvakashelwa izivakashi, khona-ke udinga ukucabanga ukuthi zingaki izinkampani zokuhamba ezilungiselele ukudayiswa. Zama ukuthenga izimvume uma zithengiswa ngesaphulelo. Phela, ngokuqinisekile uyazi ukuthi ngaphambi kokuba amaholide amanani okuvakasha aphezulu kakhulu. Ukuze uthole ithikithi engabizi, kwanele nje ukuba uqaphele futhi uqonde ngesikhathi ukuze uthole ithikithi oyifunayo. Uma uhlela ukuhlala ehhotela, ngakho-ke udinga ukuba ulalelisise, udinga ukubhuka amakamelo akho ngesikhathi. Uma kungenjalo, kufanele ukhokhe okuningi, futhi lokhu kungathinta ukuzijabulisa nokuphumula, njengoba imali yabo izohlala ingaphansi.
Uma unquma indawo yokuphumula, qiniseka ukuthi ufunda wonke amasiko awo namasiko, ukuze kungabangeli izinkinga ezingathandeki. Phela, wonke amazwe, lena indaba ehlukile, nemithetho yayo nemithetho. Ngakho-ke, uma uvakashela, khona-ke kumelwe uhlale ugcina yonke imiyalo yabo.
Yini okufanele uthathe nawe?
Ukuqala ngakho kuyadingeka ukuba ucabange ngesimo sakho sezinto ezibonakalayo, kungakhathaliseki ukuthi unemali eyanele. Ngaphambi kohambo, qiniseka ukuthatha isamba semali nawe, kodwa ungenzi lutho ngengozi. Ungazifaka phakathi kwakho konke okukukho, noma endaweni engekho omunye ozokwazi ngawe ngaphandle kwakho. Emazweni amaningi ukukhwabanisa, ukweba kuthuthukiswa kakhulu. Ngakho-ke, kudingeka wenze lokhu ukuze ungangeni esimweni esingathandeki. Qinisekisa ukusebenzisa lezi zincomo, ngoba zinikezwa izivakashi hhayi nje kuphela, kodwa ukuvimbela izimo ezingathandeki.
Futhi udinga ukuskena wonke amadokhumenti akho (ipasipoti, eminye imibhalo), futhi ugcine amakhophi abo e-mail yakho. Udinga ukuthenga okuncane okuphephile, okumelwe kuthathwe nawe, ukubeka lapho izinto ezidingekayo nezibalulekile ze-Saami. Uma uhamba nge-excursion noma kwenye indawo, faka amanye amadokhumenti adingekayo emaholeni aphephile, kodwa amaningi amahhotela anenkonzo enjalo yabavakashi.
Lokhu kungenye yezingqinamba ezibaluleke kakhulu, ngoba ungalimala nganoma yisiphi isikhathi, ikakhulukazi ngamaholide omnyaka omusha. Ngalesi sikhathi, ikakhulukazi abantu abaningi, bonke baselula kakhulu kunanini ngaphambili. Kufanele nakanjani uhlole ukuze ubone ukuthi zonke izinto ezidingekayo zihlelwe emshwalense wakho, kwanele ukwenza nje ukuhleleka.
Kungakhathaliseki ukuthi unquma kuphi, ungakhohlwa ukunamathela emithethweni ebalulekile: umkhathi kufanele ujabule futhi ujabule; yonke imisebenzi ehilela izingane kufanele ibe mnandi, ithakazelise, ukuze izingane zikhumbule leli holide isikhathi eside, futhi ukuze uhambo lube lukhumbuleka.
Uma unquma ukuya ezweni elishisayo, kufanele ucabangele iminyaka yobudala, impilo yabo kanye nesimo sengqondo, ikakhulukazi uma umehluko omkhulu yisimo sezulu ohlala kuso manje.
Kuzakhamuzi ezihlala ezifundeni ezisentshonalanga zezwe lakithi, kunconywa ukuthi zihambe nezingane zabo lapho abaningi bethu bephupha khona kusukela ebuntwaneni. Ngokwesibonelo, eLapland, lapho uSanta Claus ehlala khona, efunda inganekwane kaAnderson. Kodwa ezindaweni ezinjalo kungcono ukuhamba nezingane kusukela eminyakeni emihlanu, ngoba kakade ziqonda konke, kuzoba yinjabulo enkulu ukuhlangana noSanta Claus noma uSanta Claus. Ingane izokwazi ukubona yonke inyamazane yayo, bese yenza ngisho nesifiso. Izivakashi eziningi zezwe lethu ziyakuthanda ukugubha uNyaka Omusha eFinland. Kukhona ama-cottage amaningi, ukuhamba kwezulu okuningi, kodwa kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi leli lizwe libandayo, ngakho-ke uma udla lapho nomntanakho, kuzomele udlale ngendlela efanele ngesimo sezulu, kodwa udinga ukuthatha izinto eziningi ezifudumele nawe. EFinland azikho amaqhwa aqinile, kodwa akudingeki uhambe ubusuku lonke imini nobusuku.
Ungaya kuSanta Claus ku-Veliky Ustyug. Uma ukwahlulela ngezibuyekezo zabantu abaye bahlala kule ndawo, khona-ke kukhona okumangalisayo kakhulu. Ikakhulukazi okuningi okubonakalayo okushiwo izingane.
Kungamnandi kakhulu kuwe futhi uletha amazwe afudumele, lokhu kuyisinqumo esihle kakhulu. Kodwa kufanele uqaphele ukuthi kusukela ekuguquleni kwesimo sezulu esibukhali, ingane yakho ingagula, ikakhulukazi ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-8 ubudala. Ngaphambi kokuba uhambe, hamba ukondla kanye nempilo yengane yakho. Ungamniki amaswidi, ukudla okusheshayo, unike ingane yakho ngangokunokwenzeka imifino, izithelo, ama-citrus, amavithamini amaningi, ungasebenzisa amavithamini ezingane, ongayithenga ekhemisi.
Ingoma ngobusuku bukaKhisimusi, imibhalo yezingoma zikaKhisimusi ezinhle kakhulu
Izinkambo zebhasi: yini okufanele uthathe nawe emgwaqeni?
Iholide yangasese: i-Finland
I-Bachelorette party e-Ibiza
I-Cathedral eSantiago de Compostela
I-Tomato Pizza Sauce
Ukupaka nge-ithanga nokugcwalisa anyanisi
Ama-herbs and decoctions for weight loss
Indlela yokuchazela umyeni wami ukuthi umamazana wami akahle kakhulu
Inani lokudla izitsha ezivela eziqathelweni zokudla okunomsoco
I-Placenta - isitho esikhethekile ekukhulelwe